Ka ị nwee ike ịhazi ma mee ka ị gụgharịa na ụlọ akwụkwọ ọta akara n'ụlọ akwụkwọ
Mee ka nwa gị ghara ịma ihe ọ bụla tupu ọ malite ịga akwụkwọ
Oge mbụ n'ụlọ akwụkwọ - jide n'aka na ị ga-ezuru ezumike
Mgbe ọ dị afọ isii, ịdị mkpa nke ndụ amalite: ụmụaka na-anụrịrị okwu ndị a ma ọ bụ okwu yiri nke ahụ n'oge mbụ mgbe ntinye aha na-eru nso.
Site n'aka onye nkụzi ụlọ akwụkwọ ọta akara - onye na-eme mgbanwe dị mma
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, usoro ụlọ akwụkwọ praịmarị agbanweela ugboro ugboro ma ndị nkụzi raara onwe ha ugbu a na-anwa ime ka ọ dịkwuoro ụmụaka mfe ịmalite akwụkwọ site na itinye ọtụtụ ihe egwu n'ime ụlọ akwụkwọ ma kpachapụrụ anya na-ebelata ụjọ. Mmekọrịta dị n'etiti ụlọ akwụkwọ ọta akara na ụlọ akwụkwọ elementrị emewokwa ka mma na ọtụtụ ebe.
Ka o sina dị, ọtụtụ ụmụ akwụkwọ ọta akara na-enwe mmetụta karịa ọṅụ mgbe ha na-eche ọrụ ọhụrụ ha dị ka nwa akwụkwọ. A sị ka e kwuwe, ọhụụ ọhụrụ a na-eweta ọtụtụ mgbanwe dị oke mkpa, na, karịa, ọrụ niile.
Tinyere ndị nkụzi, dịka nne ma ọ bụ nna, ị ghaghị ịgbalị ịme mgbanwe n'etiti ụlọ akwụkwọ ọta akara na ụlọ akwụkwọ dịka o kwere mee na iji dozie nwa gị maka nsogbu ndị ọhụrụ.
Nnukwu ọdịiche dị n'etiti nkwalite akwụkwọ ụlọ akwụkwọ na usoro mmụta nke ụlọ akwụkwọ bụ na nwatakịrị nọ n'ụlọ akwụkwọ enwere ọtụtụ ọrụ. O nweela ike igwu egwu, chie ọchị ma gbarie ụbọchị dum ma na mberede 45 ga-anọ na ekwentị maka nkeji ole na ole na oge, na-edebe akwụkwọ ya mgbe nile, na-eme ihe omume ụlọ akwụkwọ na ide akwụkwọ ọcha.
Nke a bụ ihe ijuanya maka ọtụtụ ndị ọhụrụ. Ya mere, ọ bụ ihe ezi uche dị na ụmụaka na-agba nkịtị tupu ha edebanye aha ha na ụgwọ. Nke a apụtaghị na ụmụntakịrị ga-eme ihe ọ bụla edere ma ọ bụ mmepụta ihe kwa ụbọchị. E nwere ihe ndị ọzọ.
Mmalite nke ụlọ akwụkwọ dị ka mmalite nke ndụ akwụkwọ
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na nwatakịrị chọrọ ịga ụlọ ntụrụndụ ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ egwu, ha kwesịrị ibu ụzọ banye na ihe ọmụmụ ikpe na-enweghị ihe ọ bụla. Mgbe ahụ, ọ nwere ike ikpebiri n'onwe ya ma òkè ọzọ ọ ga-eru ma ọ bụ. Ma: Ozugbo nwatakịrị kpebiri, ọ ga-adị otú ahụ - karịsịa ma ọ bụrụ na a kwụọ ụgwọ ego kwa afọ.
Ọbụna na ndụ kwa ụbọchị enwere ọnọdụ n'ọnọdụ ezinụlọ ọ bụla ebe onye na-elekọta ụmụ akwụkwọ nwere ike ịrụ ọrụ ụfọdụ. Dịka ọmụmaatụ, nye nwa gị nwanyị maọbụ nwa ọrụ nke iburu ihe mkpofu, na-aga bakery, ma ọ bụ na-edozi tebụl mgbe niile. Nke a ga-egbu ọtụtụ nnụnụ na otu nkume, n'ihi na ọ bụghị naanị na nwa gị na-amalite inwe ọrụ, ma ọ na-eche na ọ dị mkpa. Tụkwasị na nke ahụ, a na-eme ka obi ike ya sie ike.
Tụkwasị na nke a, gbaa nwa gị ume ka ọ chee echiche, lelee ma gee ntị. Gịnị ka ndị nkụzi gwara banyere njem ahụ? Kedu ejiji a chọrọ maka mmemme ahụ n'oge ezumike? Kedu nhọrọ ndị nwa gị ga-ahụ iji dozie esemokwu n'etiti ihe abụọ kachasị mma?
Site na ime nke a, ị na-akwalite ikike ichebara echiche ma chee echiche na ụzọ a ga-esi edozi ya. Iwu abụọ ndị a chọrọ ngwa ngwa maka ụmụ akwụkwọ, n'ihi na nke a na-eme ka ọmụmụ ihe dị oke mkpa.
Ihe dịkwa mkpa: Ka nwatakịrị gbalịa mee ihe niile o kwere mee ma kwalite nnwere onwe ya. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ọ na-abịa ụlọ akwụkwọ, ọ ga-enwe ike ijiji naanị ya, hazie onwe ya, ma lekọta ihe onwunwe ya.
Karịsịa izu ndị mbụ ka ụmụ akwụkwọ na-agwụ ike maka ụmụaka. Ọ bụghị naanị na ị ga-eji ihe mmụta, ị ghaghị ịchọta ụzọ gị gburugburu ụlọ a na-amaghị, kụziere ụzọ n'ụlọ akwụkwọ ma were ọnọdụ gị n'ime obodo. Ọrụ ụlọ n'ụlọ n'ehihie.
Mmalite nke ụlọ akwụkwọ ga-esonyere ndị nne na nna
N'oge a, dị ka nne ma ọ bụ nna, ị kwesịrị ị hụ na nwa gị na-ezuru ụra ma nwee oge iji gbakee n'ụbọchị. V
Gbalịa ịnọgide na-enwe ọnụ ọgụgụ nke ụlọ ọrụ ehihie ka ọ dị obere ka o kwere omume ka nwa gị nwoke ma ọ bụ nwa gị nwee ike izute ndị enyi ma ọ bụ dozie ọnụ ụlọ ha.
Ejila nwa gị nsogbu ma ọ bụrụ na o siri ike ịchọta ihe mmụta agụmakwụkwọ. Ọtụtụ ndị gụrụ akwụkwọ na mbụ na-agbarịta ụka maka otuto site n'aka onye nkụzi ma tinye onwe ha n'ọnọdụ nrụgide ọ bụla. Gbaa nwa gị ume ka o nyere aka na ụlọ akwụkwọ ha, ma nabata ha ma ọ bụrụ na ha ajụ enyemaka gị.
Ihe dị mkpa dịkwa mkpa: ọ bụrụ na nwa gị mehiere, edozila ha. Ma ọ bụghị ya, ndị nkụzi ga-emehie na ọkwa nwa gị, ihe ga-esi na ya pụta ga-abụ nkụda mmụọ na nyocha mbụ.
Ọ bụrụ na ị chọpụta na nwa gị agbajiri, chọpụta mkparịta ụka ahụ na onye nkuzi. Ndị gụrụ akwụkwọ mbụ ekwesịghị iji ihe karịrị 30 gaa na 40 nkeji na ihe omume ụlọ ha.
agba? Nessie si Loch Ness
Rụgharịa site na ime ụlọ ahụ
Gini mere akpiri na-agu anyi? ụmụaka ajụjụ